Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny zon'olombelona ny Amerikana sy ny olom-pirenena Shinoa. Quora - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny zon'olombelona ny Amerikana sy ny olom-pirenena Shinoa. Quora
Any Etazonia, ny lalàm-panorenana ny zon'olombelona misy lisitry ny zavatra izay ataon'ny governemanta tsy afaka manao ho anaoAra-dalàna, dia afaka mangataka ny zo raha toa ianao manana ny fifandirana eo amin'ny roa antoko tsy miankina. Ohatra, raha misy orinasa tsy miankina manambara olona vaovao momba anao ianao dia tsy afaka hitory azy ireo ho manohintohina ny zo araka ny lalàm-panorenana, satria ny ANTSIKA amin'ny lalàm-panorenana ny zon'olombelona tafiditra ihany ny fifandraisana eo aminao sy ny governemanta. Ny lalàna AMERIKANA hanamafisana ny 'ratsy ny zon'olombelona' (izany hoe ny governemanta tsy afaka manao X ny anao), ary tsy 'tsara ny zon'olombelona' (izany hoe ny governemanta izay tsy maintsy manome anao Y). Ny foto-kevitra tsara ao amin'ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina, dia tonga avy any alemana lalàna. Ao ny PRC foto-kevitra momba ny zo mahakasika ny ara-dalàna rehetra ny fifandraisana izay tsy ahitana afa-tsy ny fifandraisana eo amin'ny governemanta sy ny tsirairay, fa eo ihany koa ny olon-tsotra. Ka raha misy olona smashes ny varavarankely, ianao dia hitory azy noho ny fanitsakitsahana ny zo ny fananana, ary ny zo amin'ny farany dia mafy orina any PRC lalàm-panorenana. Mahagaga, ao Shina izany dia sarotra mba hampiharana ny zo hanohitra ny fanjakana, satria ny fotopampianaran 'ny fanjakana liana' sy 'ny filaminam-bahoaka. Ka ny lalàm-panorenana ny zon'olombelona dia zava-dehibe kokoa amin'ny nandidy ny fifandraisana misy eo amin'ny tsy miankina amin'ny fanjakana ny olona noho ny eo amin'ny fanjakana sy ny olona. Eo ambanin'ny lalam-panorenana ao shina dia manana ny zo ho afaka maneho hevitra, ary raha tsy miankina olona manitsakitsaka ny fifanarahana momba ny zo ny fahalalahana maneho hevitra, ianao dia afaka hitory azy noho izany. Raha toa ny governemanta milaza dia ny mangina, misy tena mafy mifanohitra fa ny fitsarana dia fitsipika fa ny governemanta dia manana zo hanao izany eo ambanin'ny 'ny fanjakana liana. Any ETAZONIA, dia miasa amin'ny fomba hafa, afaka hitory amin'ny governemanta mba hisorohana ny fandikan-dalàna momba ny Fanitsiana Voalohany, saingy ny Fanitsiana Voalohany dia tsy ilaina raha toa ianao ka mifandray amin'ny olona tsy miankina. Mihevitra aho mamoaka ny hafatra amin'ny teny Sinoa bulletin board, ary ny lahatsoratra mahazo voafafa. Dia afaka hitory ny antony fa ny zo ny fahalalahana miteny no voahitsakitsaka Ankehitriny, raha ny fandehany fa raha ny tompony ny bulletin board fa voafafa ny lahatsoratra, dia afaka milaza fa ny zo ny fananana overrides ny zo ho afaka maneho hevitra. Raha toa ka ny governemanta, dia azon'ny governemanta milaza fa 'ny fanjakana liana' ary fa overrides ny zo ho afaka maneho hevitra.
Ankehitriny dia mihevitra aho, dia handefa hafatra amin'ny bulletin board, ary raha ny fandehany fa ny olona izay voafafa fa ny mpijirika izay nivoaka ho any amin'ny lohamilina.
Raha izaho no mba hitory fa ny mpijirika, dia mety ho noho ny fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana.
Ny mpijirika voafafa ny lahatsoratra, nanitsakitsaka ny zo ho afaka maneho hevitra, ary izaho dia afaka mikatsaka ny onitra. Tsy manana na inona na inona ny fananana ny zo, na dia ireo mpiasam-panjakana iray Ankehitriny Amerikana hoe, inona no tsy maintsy manao ny zo ho afaka maneho hevitra, ary izy ho marina eo ambanin'ny lalàna Amerikana.
Eo anatrehan'ny lalàna ao ETAZONIA, afaka hitory ny mpijirika ny fahavoazana, fa tsy hitory azy noho ny fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana ny zon'olombelona (izany dia mety ho tortious fitsabahan'ny). Any ETAZONIA ny rafitra ara-dalàna, ny zo ho afaka maneho hevitra mihatra amin'ny fanjakana action, ka dia tsy ilaina raha toa ka tsy miankina amin'ny tsirairay no tafiditra.
Zavatra iray ny hevitra eto dia izay rehetra ara-dalàna ny rafitra maintsy mamaha olana sasany koa fa amin'ny farany, dia ho afaka mba manao zavatra ny mpijirika.
Ny hevitra dia ny hoe aho dia mampiasa ny tena samy hafa-kevitra ara-dalàna hanao izany. Hoe: 'tsara tsy misy ny fahasamihafana satria zavatra ratsy hitranga ny mpijirika' dia toy ny milaza hoe tsara dia tsy misy ny fahasamihafana eo amin'ny teny alemà sakafo sy ny italiana sakafo satria izy rehetra dia ahitana proteina sy hiaro anao amin'ny noana. Zavatra iray ny olona ao amin'ny Etazonia hahazo diso fa izy ireo dia mihevitra fa manan-danja ny fahasamihafana eo anelanelan'ny 'ny demokrasia', ary 'jadona' izany izy ireo aza tsy tonga saina fa ianao dia afaka mampandeha ny demokrasia amin'ny foto-kevitra izay tena hafa noho ny Amerikana ireo.
Shina dia tsy nisy ny demaokrasia, saingy Alemaina sy Frantsa ireo, ary ny sasany ny fahasamihafana misy eo amin'i Shina sy ETAZONIA, dia teny alemana fahasamihafana fa tsy demokrasia jadona ireo.
Tena marina fa i Shina dia miaro ny zon'ny tsirairay latsaky ny Eoropa Andrefana na amin'ny United States. Eo ambanin'ny lalàna Shinoa (izay indray tonga avy any Alemaina), manam-pahefana atao handresentsika ny zon'olombelona eo amin'ny sehatry ny 'fanjakana liana' na 'ny filaminam-bahoaka' sy ny lalàna Shinoa mandika 'ny fiarovana ny sosialista rafitra' (izany hoe foana ny iray amin'ireo rafitra antoko) amin'ny maha-ara-dalàna ny fanjakana liana. Amin'ny izay fotoana izay koa dia tsy midika fa ny olom-pirenena Shinoa tsy manana ny zony, na ny governemanta dia rehetra-mahery. Ohatra, raha ny manampahefana Shinoa no zavatra izay mazava fa 'manokana', ary tsy voasazy ny lalàna, dia mety amin'ny foto-pisainana, ary mahagaga fa maro ny toe-javatra amin'ny fomba fanao manao zavatra mikasika izany ara-dalàna. Iray hafa maha samy hafa dia zony ny dia satria ny ANAY ny zo mirona ho amin'ny ratsy sy mahakasika ny ny governemanta, izy ireo miezaka ny tena tanteraka. Misy zavatra ohatra, ny governemanta AMERIKANA dia afaka tsy manao ambany ny Fanitsiana Voalohany, ary tsy misy faritra izay afaka milaza fa 'ny fahalalaham-pitenenana' dia tsy refesi-mandidy izy, ary afaka hanorina ny sasany mazava ny fitsipika momba ny zavatra azon'ny governemanta mihitsy aza. Satria, ny lalam-panorenana ao shina tsara ny zon'olombelona (izany hoe manana ny zo ny fanabeazana sy ny tsara ny asa), dia tsy afaka mamorona ny fitsipika rehetra izao mifototra amin'ny rafitra ho fampiharana ny zo hiasa na ny zo ny fanabeazana. Noho izany i Shina ity fitsipika ity fa lalàm-panorenana ny zo tsy mivantana judiciable. Izany fotsiny dia tsy miasa ho an'ny olona iray handeha ho any amin'ny fitsarana sy ny hoe 'tsy manan-jo hiasa, dia tsy maintsy hanome ahy ny asa.
Noho izany ao anatin'ny teny Sinoa rafitra, ny fahefana mpanao lalàna no mahatonga ilay fanapahan-kevitra momba ny fomba hampiharana ny zon'olombelona, sy ny zo araka ny lalàm-panorenana dia tena tsy tanteraka (eny, manana zo hanana asa, miala tsiny ianao no tsy an'asa, isika dia miara-miasa momba ny olana).
Na izany aza, satria izany rafitra mihatra amin'ny ara-politika zo, ianao hiafara amin'ny vitsy fiarovana amin'ny fahalalaham-pitenenana.
Professional Fiarovana Ny Fifanakalozana - Ara-Barotra Amin'i Shina Lalàna Co, Ltd
Hiina IP-Advokaadibüroo - Intellektuaalomandi Õiguse Ainult
© 2021 Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.